wararka maanta-arlaadii.net » MAQAALADA
Dadka ku dhaqan gobolka Shabeelaha hoose ayaa u badan dad beeraley ah oo akhyaara aan dagaal jecleeyn islamrkaana u dulqaata dhibaato walba ay ku sameeyaan Mooriyaanta Beelaha Hawiye ee ku sugan halkaasi oo iyagu caadeystay inay gumeeystaan oo sideey doonaan ka yeelaan dadka ku...
Wadaad xume ayaa beri raacay TABLIIQ, si dad loo soo wacdiyo (HANUUNIYO). Sheekh ku sheegga Wadaad xumaha ah wuxuu UBBO yar ku sitaa Qamri. Intii la sii socday oo dhan ayuu qujuc, dhukub ku hayay. Wadaaddada kalee TABLIIQA ah, ee la socota Wadaad xumaha ma oga Qamrigiisa! Meeshii...
Dal kasta marka ay la soo gudboonaato xaalad adag waxaa badbaadiya caqliga ay leeyihiin madaxda sare ee hogaamineysa dalka, waxeyna maskaxdooda la kaashadaan iney kala doortaan laba talo midood. Taas oo ah ama iney la yimaadaan waxqabad ay ku soo ceshadaan kalsoonida shacabkooda...
Baarlamaanku Ha Kala Doorto Badbaadinta Kursiga Madaxweynaha iyo Dowladnimada Qaranka Soomaaliyeed
Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu xilka ku yimid doorasho uu ku guuleystey oo uu ku helay inta badan codka kalsoonida baarlamaanka. Beesha caalamka iyo qabiilada Soomaaliyeed midna kuma imaan kalsoonidooda iyo dadaalkooda. Sidoo kale kuma uusan imaan rabitaanka shacabka oo codkooda...
Gudoomiyaha Xisbiga Dadka Oo U Hambalyeeyey Baarlamaanka Soomaaliya
Muqdisho:(A.M.Network)-War murtiyeed ka soo baxay Gudoomiyaha Xisbiga Dadka oo ku sugan wadanka Mareykanka ayaa baarlamaanka Soomaaliyeed ugu hambalyeyey talaabada mudan qadarinta qiimaha dowladnimada oo mudanayaasha baarlamaanka ay u hordhigeen madaxweynaha talooyin wax weyn ka...
Muqdisho:(A.M.Network)-Waxaa Shalay kulan isugu yimid Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya, Kuwaas oo dalbanayey in uu xilka iska casilo Madaxweynaha Dowladda Federaalka Xasan Sheekh.Waxa ay Xildhibaanadu sheegeen in uu Xasan Sheekh ku fashilmay...
Nidaam Dowladeed Nooceebaa Ku Haboon Dadka Soomaaliyeed ?‏
Muqdisho:(A.M.Network)-Ka dib markii ay burburtay dowladd Dhexe ee Dalku lahaa,Waxaa soo baxayey aragtiyo kala duwan oo ku aadan nooca dowladnimo ee ku haboon dadka Soomaaliyeed ka dib dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay.Dadka qaar waxa ay soo jeediyeen in la qaato nidaamka...
Muqdisho:(A.M.Network)-Wax waliba waxay leeyihiin hab raac oo hadal iyo howl ah, waase marka dhanka akadiminimada loo eegayao. Tan iyo burbukii soomaaliya waxaa hadba soo if baxayey xaalado isku day u eg oo lagu higsanayey dib u yagleelidii wixii soomaaliya horey la isugu oran...